Shiinaha JT-AEC2361a Taxanaha guryaha gubanaya soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha |Ficil
1) Naqshad fudud: qaab guri oo xariif ah, qurux badan oo is haysta, ABS tayo sare leh oo la soo dhoofiyo, midab deeqsinimo leh, si fudud ula jaanqaadi kara jawiga jikada;
2) Gaasaska ogaanshaha kala duwan: methane iyo propane ayaa la ogaan karaa si loo daboolo baahiyaha kormeerka ee deegaan kala duwan iyo ilo gaas oo kala duwan.;
3) Waxqabad sare oo ka-hortagga faragelinta:tXuub filter filter waxa lagu rakibay si uu isaga caabiyo khamriga iyo uumiga biyaha.Iyada oo la ilaalinayo dareemayaasha laftiisa iyo kordhinta nolosha adeegga, waxay si weyn u wanaajisaa waxtarka-wax-ku-oolnimada alaabta waxayna keenaysaa khibrad isticmaale oo xasilloon.Iyada oo leh wax-qabad heersare ah oo ka-hortagga faragelinta, jawaab-celinta aadka u xasaasiga ah ee gaaska dabiiciga ah;
4) Dareenka sare: waqtiga jawaabta<9s (t90), qeylo dhaan degdeg ah, oo dammaanad qaadaya badbaadada deegaanka gaaska qoyska;
5) Qaabka wax soo saarka: laba nooc oo wax soo saar ah, kuwaas oo xakameyn kara manipulator iyo qalabka kale ee loo habeeyay (qalabka solenoid valve / marawaxada qiiqa guriga) si loo daboolo baahiyaha dhabta ah ee isticmaaleyaasha kala duwan;
6)Ikhtiyaari ah eIsgaarsiinta la dheereeyay: shaqada isgaarsiinta waxaa lagu kordhin karaa moduleka WiFi dibadda si loo xaqiijiyo baahida isgaarsiinta ee hoos timaada deegaanka shabakada gaarka ah.Waxa meel fog lagala socon kara talefannada gacanta, ogeysiisyada SMS-na waxa la soo diri karaa marka gaasku soo daadanayo, iwm.
Tilmaamaha Halbeegga Alaabta
Mabda'a ogaanshaha Semiconductor
Habka ogaanshaha Daflagaado
Gaasaska la ogaan karo Ngaaska atural
Xooga saara alaarmiga 8%LEL
Waqtiga jawaabta ≤9s(t90)
Danab shaqaynaysa AC187V~AC253V(50Hz±0.5Hz)
Isticmaalka tamarta ≤3W
Heerkulka shaqada -10℃~+55℃qoyaan qaraabo≤93%±3%
Wax soo saarka 1 set ama 2dhigays ee soosaarka xiriirka, qaabka wax soo saarka waa ikhtiyaari. Wax soo saarka garaaca garaaca DC12V, dadban sida caadiga ah furan ugu badnaan helitaanka hadda 2A, ugu badnaan helitaanka danab DC30V/AC250V
Pdarajada wareegga IP30
Ddhererka roogga 1m
Chabka tallaalka module dibadda,GPRS/NB-IoT/WiFi/LoRa/Bluetooth waa ikhtiyaari
Dalbashada Shaxda Xulashada
Calaamadayn dheeri ah
Gaas in la ogaado
Wax soo saarka laba-geesoodka ah: wax-soo-saarka garaaca wadnaha + si caadi ah u furan
Fadlan sheeg danab shaqaynaysa, shuruudaha wax soo saarka iyo dhererka laynka wax soo saarka (dhererka caadiga ahi waa 25cm) markaad dalbanayso.
Wax soo saarka laba-geesoodka ah: Heerka-manipulator DC12V + soosaarka garaaca wadnaha
Fadlan sheeg danab shaqaynaya, shuruudaha wax soo saarka iyo dhererka xariiqda wax soo saarka (dhererka caadiga ah waa 25cm) markaad dalbanaysoGaasas la ogaadaywaa ikhtiyaari.
Fadlan sheeg danab shaqaynaya, shuruudaha wax soo saarka iyo dhererka xariiqda wax soo saarka (dhererka caadiga ah waa 25cm) markaad dalbanaysoGaasas la ogaadayiyoGPRS/NB-IoT/WiFi/LoRa/Bluetooth Qaybaha isgaarsiinta wirelesska waa ikhtiyaari.
Hore: BT-AEC2386 gaaska guban kara ee la qaadi karo
Xiga: AEC2301a A-Baska Digniinta Xakamaynta Alaarmiga Gaaska
lpg gaaska ogaanshaha, qalabka gaaska go'an, gaaska ololi kara, qalabka gaaska, Shiine gaaska baadhe, Alaarmiga gaaska gubanaya,